I-Acer Chromebook: Uluhlu olutsha lweencwadana lusemthethweni | Iindaba zeGajethi
I-IFA 2019 iqala nge-Acer njengoyena mntu uphambili. Inkampani igqibile ukwenza inkomfa yayo yemithombo yeendaba apho besishiye nenqwaba yeendaba. Phakathi kweemveliso abazishiyileyo kuthi Uluhlu lwabo olutsha lweelaptops zeChannelbook. Basishiyela iimodeli ezine kuyo (315, 314, 311 kunye ne-Spin 311).
Ezi ziilaptops ezine ezifanelekileyo zabafundi, yenzelwe ukunika owona msebenzi ulungileyo ngawo onke amaxesha. Uyilo lwala maxesha, izinto ezintle kunye nexabiso elikhulu lemali ngamaqhosha kolu luhlu lweAcer Chromebook. Ke banayo yonke into ukuba ibe yenye yezona zidumileyo kweli candelo.
Uluhlu lungahlulwa lube ngamaqela amabini, ngeemodeli ezimbini ezilinyathelo elingasentla ngokobungakanani kunye nokusebenza. Ngelixa sinezinye iimodeli ezimbini ezinobungakanani obuncinci, kodwa ezigcina amanqaku apheleleyo abafundi ngakumbi. Olu luhlu olutsha lwe-Chromebook.
1 I-Chromebook 315 kunye neChannelbook 314: Iimodeli eziphambili
2 I-Acer Chromebook Spin 311 kunye neChannelbook 311: Iimodeli ezincinci
I-Chromebook 315 kunye neChannelbook 314: Iimodeli eziphambili
Eyokuqala ziimodeli ezimbini ezinobungakanani obukhulu. Ezi zii-Chromebook 315 kunye neChannelbook 314, zezona zinkulu kwaye zinamandla kuwo. Ukufezekisa ngokusebenza nokusinika intsebenzo elungileyo, nangona ikwalungile xa kufikwa ekubukeni umxholo wemultimedia, enkosi kwizikrini zabo ezinkulu kunye nomgangatho. Ke bema ngaphandle kuluhlu.
I-Chromebook 315 ine-15,6-intshi yesikriniNgelixa iChannelbook 314 inesikrini esine-intshi ezili-14. Kumatyala omabini anesisombululo esipheleleyo se-HD (1920 x 1080 p) ngetekhnoloji ye-IPSii kunye nee-engile zokubukela ngokubanzi. I-Chromebook 315 ikwabandakanya ikhiphedi enikezelwe ngamanani, iyenza isixhobo esihle sabasebenzisi kunye nabanini bamashishini abancinci.
I-Acer ibonelela kwimeko yeChannelbook 315 ukhetho lwe ukudibanisa iprosesa ye-Intel Pentium yesilivere ye-N5000. Uluhlu olupheleleyo lusebenzisa i-Intel Celeron N4000 ye-dual-core okanye i-N4100 quad-core njengeeprosesa, kodwa le modeli inika ukhetho olongezelelekileyo. Ngokubhekisele kwi-RAM kunye nokugcinwa, i-315 ifike kwi-8GB ye-RAM kunye ne-128GB yokugcina iMMC. Kwimeko ye-314 yi-8 GB kunye ne-64 GB, ngokwahlukeneyo. Ezi laptops zimbini zibonelela ngeeyure eziyi-12,5 zokuzimela.
I-Acer Chromebook Spin 311 kunye neChannelbook 311: Iimodeli ezincinci
Uluhlu lwezi Chromebook lugqityiwe zezi laptops zimbini, ezona zincinci ngokobungakanani. I-brand isishiya ne-Chromebook Spin 311 kunye ne-311, iimodeli ezimbini ezikhanyayo kunye nezilungele ukuqhuba imihla ngemihla ngalo lonke ixesha. Zombini Banesikrini se-11,6-intshi. I-Acer Chromebook Spin 311 (CP311-2H) ine-360-degree design eguqukayo, ke isikrini sayo sokuchukumisa i-11,6-intshi sinokusetyenziswa ngeendlela ezine ezahlukeneyo: ithebhulethi, ilaptop, umboniso kunye nentente.
Imodeli yesibini kolu luhlu yiChannelbook 311, ene-11,6-intshi efanayo yesayizi yesikrini. Kwimeko yayo, inoyilo lwelaptop yesiko, kwaye ilula kakhulu, inobunzima obungaphezulu kwe-1 kg. Ke kulula ukuyiphatha ngalo lonke ixesha. Laptop iza kuzo zombini iiskrini kunye neenguqulelo ezingezizo ezokuchukumisa. Ezi laptops zimbini zisinika ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-10 zokuzimela.
I-Acer isinika ukuya kuthi ga kwi-8 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcina KwiChannelbook Spin 311. Ngelixa ukwiChannelbook 311 ungakhetha ukuya kuthi ga kwi-4GB kunye ne-64GB, ngokwahlukeneyo. I-Intel Celeron N4000 ye-dual-core okanye i-N4100 quad-core isetyenziswa njengaprosesa kule meko. Ngokunxibelelana, zonke zinezibuko ezimbini ze-USB 3.1 Type-C Gen 1 kwaye zinekhamera yangaphambili ye-HD yeefowuni zevidiyo.
I-Acer Swift 7, ilaptop encinci entle ngexabiso elingenantlonelo [Hlaziya]
I-Acer iqinisekisile ukuba uluhlu lwe-Chromebook luya kuthengiswa kokuwa, kuyo yonke inyanga ka-Okthobha. Nangona imihla inokwahluka ngokuxhomekeke kwintengiso ekubhekiswa kuyo, sinokuyilindela kule nyanga. Inkampani ikwabelane ngamaxabiso ale laptops nganye:
I-Chromebook 315 iya kufumaneka ukusuka nge-Okthobha ngexabiso lama-euro angama-329.
I-Chromebook 314 izakwaziswa ngo-Okthobha ngexabiso lama-euro angama-299.
I-Chromebook Spin 311 iya kufumaneka ukusuka ngo-Okthobha ngexabiso lama-euro angama-329.
I-Acer Chromebook 311 iya kufumaneka ukusuka nge-Okthobha ngexabiso lama-249 euros.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » I-Acer iveza uluhlu lwayo lweencwadana zeencwadana zeChannelbook kwi-IFA 2019
UKobo Libra H2O, umjikelo wonke weeReaders oya kuthi ufunde kuzo naphi na apho uya khona